Ụbọchị My Pet » Leslie si Top Iri Aro nke Summer Doggie iwu oru
Ezi nkịta omume dị mkpa nile n'afọ, ma na-aghọ oké egwu na-ekpo ọkụ ihu igwe mgbe nkịta na-apụ ha leashes na ndị, ka ọ dị na mbụ, na-apụ ha rockers. Mgbe canines na ụmụ mmadụ na-ekere òkè ahịhịa, osimiri, Frisbees na hiking ụzọ ụkwụ, ụwa ikukota. M ga-eti mkpu, ma ọ bụrụ na m na-ahụ otu ihe Rottweiler kwere na-akpagharị gburugburu unfettered nanị n'ihi na ọ bụ a anwụ na-acha n'ụbọchị. Na-amasị m nkịta. Ọ bụ ndị nwe ha na-eme ka ha anya ọjọọ. Ya mere, nwe, ebe a bụ m iwu nke okpomọkụ iwu oru n'ihi na gị nkịta na m.
1. Ekwela ka gị na nkịta pee na onye agbata obi gị si hydrangeas. Onye agbata obi gị tinyeworo a otutu oge na mgbalị iji mee ka ya n'ogige oge ntoju na nkịta mmamịrị abụghị ihe ọ pụtara mgbe ọ gwara okooko osisi dị mkpa atọ taa.
2. Ekwela ka gị na nkịta poop na ahịhịa na ogige. (Ọ dị m mkpa na-ekwu na ihe niile nkịta poop ga-mgbe ina ekemende, ma ọ bụrụ na ị na-ebi wilds nke Alaska? Dị ka America ị na-eme na-enweta nnwere onwe ka nkịta poop ifatilaiza gị onwe gị backyard, ma mgbe ahụ,, Achọghị m ka m mara gị.) N'oge okpomọkụ, ogige lawns na-eji kụrụ ụdị, bọl ebre, na izugbe lolling banyere. Ihe ikpeazụ onye chọrọ ịhụ na onwe mgbe lolling banyere na ahịhịa bụ ụfọdụ unidentifiable, ma ọ bụ njọ ụfọdụ dị amata na aṅụrụma ruru umi.
3. Ekwela ka gị na nkịta drool ọzọ na nkịta ma ọ bụ na enyi gị ọhụrụ Pumas. Ọ bụghị mma na ọ bụ na-asọ oyi. (Ọ bụ ezie na onye pụrụ ịrụ ụka na $100 tenis akpụkpọ ụkwụ kwesịrị a obere drool) Ma e wezụga, drooling bụ mgbe a mgbaàmà nke akpịrị ịkpọ nkụ, ya mere n'aka gị nkịta na-na-mmiri zuru ezu. Ma eleghị anya, ọ bụ nanị otu onye n'ime ndị nkịta ndị slobbers a otutu. Na ma ikpe na ọ bụ ọrụ gị ihicha drool tupu o nwere ohere ka mmiri iri a Bichon.
4. Ọ ka gị na nkịta ụtọ a igwu mmiri na a ọdọ mmiri, naanị ma ọ bụrụ na ị na-e na-ekiri ya na nchekwa, nke ọdọ mmiri bụ na gị onwe gị, ị dị ọcha ya ntutu na unu adịghị ekwe ya ka isonye na a ọkụkọ agha karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-nwetara gị ya n'ubu ya.
5. Ọ gị nkịta osimiri Ma ekwela ka ya poop na mgbe ahụ na-ekpuchi ya na ájá. Ekwela ka ya-agba ọsọ n'elu akwa nhicha eziga ájá n'ime ihu. Ekwela ka ya igwu mmiri na mgbe ahụ ịma jijiji onwe ya anya nso sunbathers. Ọ gị nkịta a narị yaadị ala osimiri ma na-ekwe ya surf ya obi ọdịnaya.
6. Ekwela ka gị na nkịta igwu mmiri a na ọdọ mmiri na ị bụghị maara na. Ọ pụrụ ibu bacteria ma ọ bụ ọrịa. Ọ bụghị banyere ihe agu iyi dị ka onye na-hụrụ nso nso a na Central Park si Harlem Meer, a na-ewu ewu ntụpọ n'ihi na nkịta na-asa ahụ. Ya mere, tupu ị ka gị na nkịta igwu mmiri na onye na-amaghị na ọdọ mmiri, ị igwu mmiri n'ebe mbụ iji jide n'aka na ọ bụ mma.
7. Ọ na-eme njem na gị nkịta ma ghara iche na nanị n'ihi na a na-enye ohere nkwari akụ nkịta, na onye ọ bụla na nkwari akụ bụ nkịta onye. N'ezie, iche na ọ dịghị onye bụ a nkịta onye, na ị nwere ike kwere azụ. Gbalịa na-barking ka a kacha nta (gị nkịta oke), mgbe niile na-gị nkịta na a leash, na-eje ije ya ugboro ugboro na ikpu n'ụba.
8. Ọ gị nkịta na hikes ma na-gị nkịta na a leash ya mere, ọ na-adịghị furu efu ma ọ dịghị ịkwada a ibe njem mmadụ. Ọ bụ ogologo eruda site n'elu Yosemite Falls.
9. Ejila gị nkịta a ọdọ mmiri ọzọ ma ọ bụ a Anụ Mmịkpọ enweghị na-arịọ usu mbụ. Dị nnọọ n'ihi na ọ bụ n'oge okpomọkụ na ya yiri pụtara ịhapụ ụlọ ya na ndị dị otú ahụ a mara mma ụbọchị, Ejila gị nkịta gị n'ebe ị na-aga. Ị nwere ike ghara ịhapụ ya n'ime ụgbọ ala (ọ na ọkọkpọhi ụzọ oke ọkụ), ma ị nwere ike ghara ịhapụ ya na n'akụkụ ụzọ kegide a osisi (na yelping na-eti adachi udo, ghara ikwu gị pookie ike ina zuru). Ọ na-ahapụ gị nkịta n'ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na-aga ebe kwesịrị ekwesị n'ihi na nkịta. Ọ ga-bụghị owu na-ama. Ọ ga na-enwe ekele. Ọ ga-enweghị ka obere okwu na-.
10. ADỊGHỊ shiee gị nkịta ntutu n'ihi na unu chere na ọ bụ oke ọkụ. Nke ahụ na-akpọ anthropormorphizing, nke bụ a ụfọdụ ụdị doggie ịta ahụ na-agụnye ma na ọ bụghị nanị na-eme ya na-eyi a raincoat na booties. A nkịta ntutu-emekwa ka ọ dị jụụ na-ekpo ọkụ ụbọchị na-ekpo ọkụ na oyi ndị. (Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke a, biko gaa na ngwa ngwa gị na mpaghara na-ere akwụkwọ na-esi na gị a nkịta elekọta primer, tinyere m akwụkwọ ọhụrụ, The Dog Walker